Gastroesophageal Reflux isifo (Gerd) kubhekwa omunye ezivamile futhi engase ezinzima zokugula ngomphimbo. Lesi sifo ivame ukuba anqobe inani elandayo labantu. Reflux Gastroesophageal uyakwazi ukunciphisa kakhulu izinga lokuphila komuntu ukucunula okungenani inchubekelembili yayo yezinkinga ngempela eziyingozi, ezihlanganisa umdlavuza emphinjeni.
Ngokuhambisana izibalo wezokwelapha kulesi zokugula itholwa e-20% abantu.
Reflux Gastroesophageal kungenxa ukuhlukumeza umsebenzi okuphetha ka sphincter ngomphimbo, etholakala ezansi, kanye ukuchayeka eside ukuba le mucosa we kuqhoqhoqho okuqukethwe isisu. Ngamanye amazwi, ukubuyela emuva kwenzeka Ukungena unimpeded.
I evamile asidi we esiswini uyahluka 1.5-2.0, futhi emphinjeni - 6.0-7.0. Reflux Gastroesophageal usekhuluma izinkomba e aphansi ngomphimbo asidi ecaleni ngenxa esidi okuqukethwe esiswini engena phakathi kwalo. contact isikhathi eside abezindaba amabili ukuvuvukala. Ukwakheka ihlanganisa esidi esiswini juice futhi wokugaya ukudla enzyme kakhulu neqhaza ekuthuthukiseni ukuvuvukala.
Umonakalo kungenzeka kwabangela futhi okuqukethwe duodenum (bicarbonates, ama-enzyme, Bile acid). Ngo inqubo ekubunjweni esiswini ngokuvamile imakwe Ukungena emphinjeni, okubangela ukulimala mucosa kanye, ngenxa yalokho, ukuncishiswa asidi kuwo.
Reflux Gastroesophageal kungokwemvelo ukubonakaliswa bokuphila esimweni izimfuneko ezithile:
- ukuthuthukiswa ngokuyinhloko kwenzeka emva kokudla;
- amanothi imvamisa ezincane kanye nesikhathi ngosuku;
- ayitholiwe ukungakhululeki;
- imvamisa okuncane ebusuku.
State uthathwa njengomgcini normal endabeni:
- Iziqephu njalo noma nokunwetshiwe;
- uma waphawula kokubili emini ebusuku;
- ephelezelwa ukuvuvukala.
Lesi sifo linenani ukubonakaliswa isici. Lezi zihlanganisa isilungulela, ubuhlungu lapho uvuleka, ubuhlungu lwesokunxele esifubeni, ngemuva breastbone, amathe up, ukubhujiswa izinyo koqweqwe lwawo, hoarseness, ukukhwehlela eziphikelelayo.
Njengoba sazi ukuthi kule thoracic ingaphakathi ingcindezi ingaphansi kwe esiswini, Reflux kufanele avele njalo. Nokho, izinga nesenzakalo yayo - a rarity, ngenxa umsebenzi obturator we cardia. Ngokuvamile, kuba ukuvela umuntu enempilo ephawulwe isikhathi esifushane (nemizuzu emihlanu). Kule ndaba, isimo esinjalo zokugula akubhekwa.
Gastroesophageal Reflux isifo. ukwelashwa
izinyathelo zokwelapha ngokuyinhloko okuhloswe ngazo ukunciphisa ububi besimo sokuguquka inqubo, ukunciphisa okuqukethwe elimazayo besikhundla esiswini, kanye nokuvikela ulwelwesi emphinjeni.
Ukwelashwa ihlanganisa control esiyisibopho isisindo somzimba, ukubhema lokuphela, nophuzo oludakayo, ukudla okunamafutha, ikhofi, ushokoledi. Kusukela Ukudla nekugwema ukudla ene-asidi.
ukunakwa okuningi ikhokhelwa yokudla. Ochwepheshe batusa ukudla kaningi izingxenyana ezincane.
In the ukungabikho umphumela oqabulayo udokotela angase akunikeze antacids. Lezi amalungiselelo aqukethe magnesium nosawoti, aluminium ne-calcium. Lezi izinto labo abazokwazi zokuyithena isenzo hydrochloric acid.
Kunconywa ukuba makudle antacids e ngesimo si. Mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi isisu kanye kuqhoqhoqho lapho zaphathwa amaconsi amancane akhiwa, kanjalo ngcono umphumela. Phakathi kwezidakamizwa ezivame uqaphele "Almagell" "Maalox" "Fosfalyugel". Lezi izindlela zimumethe nosawoti magnesium kanye ne-aluminium e okungu ahlukahlukene noma aluminium usawoti kuphela.
Sequester - kunjani?
Inkondlo "I Ihlathi ekwindla" - wobuciko encane wabhala Twardowski
Iyini imbangela kuqhuma intaba-mlilo
M. S. Gorbachev: kosuku lokufa asikafiki
Perm amakolishi sicelo Handbook
Eyelashes eside kakhulu - iqiniso kanye eqanjiwe?
Silicone isikhunta insipho ngezandla